Ammaanka Puntland, ciidamada amniga iyo askariga indhoshareeran ee Bossaso (qaybtii 2aad) – Radio Daljir
Ammaanka Puntland, ciidamada amniga iyo askariga indhoshareeran ee Bossaso (qaybtii 2aad)
Noofember 27, 2018 8:00 g 3
Magaalada Bossaso waa halbowlaha ganacsiga Puntland lana qiyaaso in ay ku noolyihiin dad kor-u-dhaafaya hal milyan oo qof oo ka kala yimid dhammaan gobolada dalka Soomaaliya iyo gobolada Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Bossaso muddooyinkii dambe waxaa si isdabajoog ah u soo wajahay amnixumo ballaaran. Waxaa ka dhaca dilal taxane ah. Waxaa ka dhaca iskudayo dilal. Waxaana badanaa aan jirin cid loo soo qabto dilalkaas iyo iskudayada dilalka qorshaysan ee lala beegto nindoorka Bossaso. Waxaan jirin warbixin dowlo iyo mid ciidamo amni oo dadka lagu dajinayo, lagu hagayo, laguna wargalinayo xaalka amni ee magaalada iyo qorshaha ciidamada amniga.
Jirtaayo intaas oo marxaladood oo aad u adag, dilalka Bossaso in ay sii bataan mooyee, maanta ma muuqato sansaan ama qorshe ciidan amni iyo hoggaan amni oo lagu sugayo amniga Bossaso iyo kan nindoorkeeda. Dilalka Bossaso waxaa ugu dambeeyey ganacsade ka tirsanaa shirkadda Saabir oo 22kii bishan Noofembar 2018 lagu dilay bartamaha magaalada Bossaso. Maalin kahor 21kii bisha waxaa Bossaso lagu dhaawacay garsoore ka tirsanaa maxkamadda sare ee Puntland.
Ciidamada amni ee Bossaso (iyo dhammaan ciidamada amni ee Puntland) weli lagama hayo warbixino ama waraysiyo ay ku shaacinayaan qorshaha ammaanka iyo waliba faahfaahino la xiriira cidda dilalka Bossaso iyo Gaalkacyo ka gaysata, sida ay qorshaha u maleegaan deedna u fuliyaan, meelaha deegaan u ah iyo meesha ay u baxsadaan, cidda gabbaadka siisa, iyo sida ay u baxsadaan dil fulin kabacdi.
Ammaanka Bossaso iyo Canshuurqaadaha Cusub
Dilalka Bossaso waa kuwo aan loogu kala aabayeelin haldoorka bulshada, waxayna noqdeen kuwo la dilay, kuwa la dhaawacay, kuwo carar ku maqan, qaar oggolaaday bixinta lacago baad ah ama “canshuur silloon” aanse la aqoon cidda qaadata (ma maafiya cusub oo hadda curatay baa, ma Daacish iyo ISIS baa, ma al-Shabaab iyo amniyaatkeedii baa?), qaar baa casar dheere guryaha hoosta ka xirta, qaar kalena waa welwel iyo cabsi u joog.
Dilalka iyo iskudayada dil kuma koobna kuwo lala beegsado nindoorka Puntland, laakiin waxaa jira kuwo si gaar ah loola beegsado Ciidanka Canshuuraha ee degmada Bossaso.
Radio Daljir oo xiriir la samaysay qaar ganacsatada suuqa Bossaso ayaa noo xaqiijiyey in Ciidanka Canshuuraha ee Dowladda Hoose ee Bossaso ay cabsi darteed diideen in ay suuqa canshuur ka soo aruuriyaan. Markii aan ganacsatada weydiinay, “yaa hadda canshuuraha dowladda hoose idin ka aruuriya” waxa ay noogu jawaabeen, “Dowladda Hoose ee Bossaso waxa ay qoratay oo shaqaalaysiisay dumar indhoshareeran, ayagaana hadda si qarsoodi ah nooga aruuriya canshuuraha Dowladda Hoose ee degmada Bossaso.”
Maamul dowlo waa awood, waa awood fulin. Dowladi waxa ay dowlad ku tahay markii ay kaligeed haysato oo maamusho awoodda dilka iyo tan ciqaabta. Sidaas darteed haddii awooddii dowladda hoose ayba baqo gashay waxaa cad in si dadban ay uga wareegtay awooddeeddii dowladnimo.
Haddaba su’aal isweydiin mudan baa waxa ay tahay sidan: Canshuur-qaadaha cusub ee ka curtay suuqyada Bossaso haddii uu ganacsatada ku amro in aysan bixin karin canshuur dowlo, maxay markaas noqonaysaa jawaabta dowladda hoose ee Bossaso iyo tan dowladda Puntland iyo ciidamadeeda amni?
Ammaanka iyo Indhoshareerka Bossaso
Dadka reer Bossaso ayaa horay “askariga indhoshareeran” u yaqaanay malleeshiyaadka al-Shabaab oo lagu bartay waji-duubka, balse xilliyadii danbe askariga indhoshareeran waxaa ku soo biiray ciidamada amniga ee Puntland oo magacoodii hore ahaan jiray PIS (Puntland Intelligence Service) laakiin markii danbe magacooda u badalay PSF (Puntland Security Force).
Ciidamada PIS waxaa taliye u ahaan jiray Alle ha u naxariistee Cismaan Cabdullaahi Diyaano. PSF-ta waxaa asbuucyo kahor taliye u ahaa Assad Cismaan Cabdullaahi oo u dhalay Taliye Cismaan Diyaano. Assad Cismaan ayaa lagu soo warramayaa in uu hadda u sharraxanyahay xilka Madaxweyne Puntland, uuna xilkii Taliyaha Ciidamada PSF-ta ku wareejiyey walaakiis Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano. Ciidamada PSFT-ta waxaa maalgaliya ciidamada dowladda Mareykanka, qaybta AFRICOM Stuttgart, Germany, waxayna hoostagaan faraca Jabuuti ee CJTF-HOA.
Ciidamada kale ee indhoshareerarka lagu bartay waa Ciidamadda Badda ee Puntland, loona yaqaan PMPF (Puntland Marine Police Force). PMPF waxaa maalgaliya oo qalabeeyey dowladda Imaaraadka Carabta.
Illaa iyo hadda ma cadda doorka labada ciidan ee PSF iyo PMPF ay ku leeyihiin sugitaanka amni ee nindoorka Bossaso iyo kan ammaan ee isla magalaada Bossaso oo labada ciidanba xarun u ah.
Yaa lagu Ogyahay Amniga Bossaso?
Saraakiil ciidamo Puntland iyo kuwo amni oo Radio Daljir xiriiro kala duwan la sameeyey ayaan waxa aan weydiinay su’aal ah, “qiyaasa ciidamada Puntland nooc kasta oo ay yihiin oo Bossaso saldhigyo ku leh?” Saraakiisha oo tirooyinka ay carrobaabeen ay kaladuwanaayeen ayaa celcelis ahaan waxa aan qiyaasnay in ay yihiin kudhawaad toban kun oo askari oo isugu jira qaybaha kala duwan ee ciidamada Puntland, sida booliis, daraawiish, PMPF iyo PSF.
Ka sokoow malaayiinta doolar ee bil walba dowladaha Mareykanka iyo Imaaraadku ku baxshaan ciidamada PSF iyo kuwa PMPF, waxaa la qiyaasayaa in dowladda Puntland ay bil walba ciidanka roondada ee Bosaso oo kaliya ku bixiso ku dhawaad bishii $60,000.
Haddaba maxaa sabab u ah ammaandarrada Bossaso iyo Gaalkacyo iyo laynta nindoorka Puntland? Ma miisaaniyad la’aan baa? Ma musuqmaasuq iyo miisaaniyaddii ciidamada amniga oo sidii loo dhigay aan loo isticmaalin baa? Ma madaxda argagixisada oo markii la soo qabto, danbiga lagu caddeeyo, maxkamaddu toogasho ku xukumo la siidaynayo, sida Cabdirisaaq Tahliil ina Caloolgeel, baa sabab u ah dilalka joogtada ka noqday Bossaso iyo Gaalkacyo? Xaggee wax iskaqabsan la’yihiin?
Weli ma hayno jawaabaha su’aalaha kore, laakiin mid baan shaki ku jirin oo bal toban kun oo askari oo reer Punland ah oo ku qalabaysan nooc walba oo qalab ciidan, miisaaniyadda intaas le’eg aysan maalin ka go’in barbardhig toban wiil oo bastoolado ku hubaysan oo xataa badankoodu aysan Puntland u dhalan. Isbarbardhig kabacdi, isweydii “sidee ku dhici kartaa jirtaayo intaas in Bossaso ay maanta marxalad intaas le’eg ku sugantahay, oo xataa ciidamadii dowladdu aysan awood u lahayn aruurinta canshuuraha dowladda Hoose?”
Dhegayste fajicisada maanta ee Puntland intaas kaliya ma aha ee Bossaso iyo Gaalkacyo oo maanta xaalkoodu saas yahay baa haddana badanaa taliyayaashii ciidamada ammaanka Puntland waxa ay wada yihiin musharrixiin, murashax xildhibaan iyo musharrax madaxweyne Puntland. Waxaa musharrixiin madaxweyne kala ah Taliyihii Ciidamada Daraawiishta Puntland, Janaraal Siciid Dheere, iyo Taliyihii Ciidamada Amniga Puntland ee PSF-ta Taliye Asad Cisman Cabdullaahi. Waxaa musharrixiin xildhibaan Puntland kala ah Taliyihii Qaybta Gobolka Bari Cabdixakiin Yusuf, iyo waliba Taliyihii Ilaalada Canshuuraha Gobolka Bari Maxamed Baarri. Dhammaan musharrixiintaas waxa ay isugu jiraan kuwa si rasmi ah ugu dhawaaqay iyo kuwo si hoose u wata kaambaykooda, dhammaantoodna bulshadu ay wada ogtahay in ay wada musharrax yihiin.
Yaa la xukumayaa oo canshuur laga qaadayaa haddii nindoorkii Puntland joogto loo laynayo awooddii dowladnimana ay kala dhantaalantahay?
Radio Daljir kala soco warbixinno taxane ah oo aan ku eegeyno xaaladda amni ee Puntland, siiba ammaanka magaalooyinka Bossaso iyo Gaalkacyo.
FG: illaa iyo markii aan biloownay warbixinada ammaanka iyo ciidamada amni ee Puntland, Radio Daljir waxaa si joogto ah ula soo xiriirayey saraakiisha amni ee Puntland, oday dhaqameedyo, qaybo kala duwan ee dowladda Puntland, iyo kuwo noo diiday in ay magacooda iyo mansabkooda shaaciyaan. Intaas oo xiriir ah kama aysan marnayn hanjabaado dil iyo ciqaab haddii aysan Daljir joojin warbixinada ammaanka Puntland. Sidaas darteed waxaan bulshada reer Puntland iyo dowladda Puntland ogeysiinaynaa iyo ay fiiro gaar ah u yeeshaan hanjabaadaha lala beegsanayo Radio Daljir iyo shaqaalaha Daljir.
Qaybihii hore hoos ka daalaco
Maxaad ka taqaan ciidamada ‘Puntland Security Force (PSF)’ ee Mareykanku maalgaliyo? (dhegayso)
Saxaafada dunida ee xorta ah ma waxay kula tahay inay xor iska noqotay?
Maya,dil,xarig iwm baysoo mareen wayna usoo dhabar adaygeen kadibna xorbay noqdeen.
Markaa Daljir waxaan leeyahay ha ujoojininee wada.beenta & buunbuunintana iska ilaasha.hada ogoowoo xoriyada Saxaafadu ma aha warkasta oo jira inaad sheegto’xadkiinana hadhaafina wixii Dadka,Diinta & Qaranimadana wax udhimaya MAYA waa mamnuuc.sikastuu warjira uyahay waa mamnuuc.
Lkn ha ujoojinina Qabqablayaasha Dalka haysta ee u soo shaqo tegey ee xaaraan Ku naaxa ah!!!.
Israeli toilet Paper.
zmzm mhmed 6 months
waa nasiib daro in xaqiiqda Indhaha laga qarsado cidi toosh ku ifisana loo hanjabo waana xaqiiq waxa dhacay in ay qayb kayiyihiin dadkan amniga loo wakiishay ee dowladaha shisheeye maalgaliyaan kuwa amni xumada wadana isla dowladahaas ayaa maalgaliya siday iila muuqato
Abdikafi mahamud 6 months
Waa ayaan daro insaxaafadii bulshada kubaraarujinaysay halista amni xumo ee kajirta boosaaso iyo glkcyo loo hanjabo oo afka laqabto oo wiliba ay uhanjabaan kuwiilagarabay inay amni gooda sugaan allaa umaqan dadka shacabkaa iyo saxaafada waxaan kutalinayaa radio daljir inaad naan joojin wacyigalinta aad u wadaan bulshadana wixii jira lawadaaga